किन घटिरहेको छ सेयर बजार, 'करेक्सन' कि 'बियरिस ट्रेन्ड'को सुरूआत? :: कमल नेपाल :: Setopati
किन घटिरहेको छ सेयर बजार, 'करेक्सन' कि 'बियरिस ट्रेन्ड'को सुरूआत?
इतिहास हेर्दा सेयर बजार प्रायः साउन/भदौमै नयाँ अंकको रेकर्ड बन्ने गरेको पाइन्छ।
यसअघि २०७३ साउन १२ गते सेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले १८८१ अंकको उच्च रेकर्ड बनाएको थियो। त्यसपछि ‘बियरिस ट्रेण्ड’ समाउँदै बजार २०७५ माघ २८ गते ११२९ अंकसम्म झर्यो।
त्यहीं वर्षको अन्त्यदेखि ‘बुलिस ट्रेन्ड’ थालेको बजारले दुई साताअघि मात्रै, २०७८ भदौ २ गते नयाँ कीर्तिमानी ३१९८ अंक कायम गर्यो। त्यसयता बजार घटिरहेको छ।
भदौ २ गतेयता कारोबार भएका दिनमा बजार जम्मा २ दिन मात्रै बढेको छ भने अरु ६ दिन घटेको छ। समग्रमा उच्च अंकको रेकर्डपछि बजार साढे ८ प्रतिशतले घटिसकेको छ। बिहीबार बजार बन्द हुँदा २९२६ अंकमा कायम भएको छ।
यो पटकको ‘बुलिस ट्रेन्ड’मा भदौ २ को अंक नै उच्चतम विन्दु हुने हो वा फेरि बढ्छ भन्ने विषयमा लगानीकर्ताका आ–आफ्नै टिप्पणी छन्। प्रायः लगानीकर्ताले आफूअनुकुल नै व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
खासगरी धेरै सेयर होल्ड गरेकाले अहिले करेक्सन मात्रै भएको र बजारले अर्को नयाँ रेकर्ड बनाउने दावी गर्छन् भने सेयर बिक्री गरेर बसेकाले अब बजारले बियरिस चक्र समातेको टिप्पणी गर्छन्।
बजारलाई प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका राजु मुनिकार इतिहास हेर्दा बुलको चक्र अवधि अझै नसकिएको बताउँछन्। ‘विगतका इतिहास हेर्ने हो भने बुलिस वा बियरिस ट्रेन्डले साढे ३ देखि ४ वर्षसम्मको एउटा चक्र लिएको हुन्छ, अहिलेको बुल चक्र साढे दुई वर्ष मात्रै भएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सामान्यतः उच्चतम अंकबाट २० प्रतिशतभन्दा तल बजार झरेमा बियरिस ट्रेन्डमा गएको बुझ्ने गरिन्छ। तर अहिलेको बजार घटाई एउटा करेक्सन मात्रै रहेको मुनिकार औंल्याउँछन्। यद्यपि यो करेक्सन ४–५ महिनासम्म पनि जान सक्ने उनी औंल्याउँछन्।
यस पटक सेयर बजारको अंक मात्रै घटेको छैन, दैनिक कारोबार हुने रकम पनि आधाभन्दा कममा खुम्चिन थालेको छ। भदौ ३ गते साढे २० अर्ब रुपैयाँको सेयर किनबेच भएकोमा आज भदौ १७ गते ९ अर्ब ५० करोडमा सीमित भएको छ।
यसरी परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घट्दै जानुले दुई अर्थ जनाउँछ। एउटा, किन्नेहरुसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छैन, उनीहरु कमजोर हुँदै गएका छन्। अर्को, बेच्नेहरु आत्तिएका छैनन्, धेरै घटेको मूल्यमा बेच्न चाहेका छैनन्।
कारोबार घट्नुमा हाल दुबै पक्षको प्रभाव रहेको लगानीकर्ता बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले एक व्यक्ति वा परिवारले सेयर खरिदका लागि सेयर नै धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १२ करोडभन्दा बढी ऋण नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यहीं व्यवस्थाकै कारण अहिले बजारमा असर परिरहेको बताउँछन् सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल। आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीकर्ताले बैधानिक जुनसुकै व्यवसाय गर्न पाउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको उनी बताउँछन्।
उनले भने ‘राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था गलत छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ, हाम्रो सम्पत्तिको अधिकारमा बन्देज लाग्यो।’ यदि एक व्यक्ति वा परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयरमै लगानीका लागि सेयर धितो राखेर १२ करोड भन्दा बढी ऋण लिएको अवस्थामा एक वर्षभित्र सीमामा ल्याइसक्नुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ बेच्नेहरु पनि धेरै आत्तिएको अवस्था नरहेको उनी फुल्लेल बताउँछन्। ‘कम्पनीहरुले लाभांश दिने बेला आएको छ, त्यसकारण यो एउटा सामान्य करेक्सन हो, आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन’ उनले भने।
स्टक ब्रोकर नम्वर ३८, दिपशिखाका संचालक विष्णु ओझा बजारलाई एउटा विषयले मात्रै नभई धेरै पक्षले प्रभाव पारेको बताउँछन्।
‘विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाले बजारलाई प्रभाव पार्छ नै, अर्कोतर्फ निषेधाज्ञा पनि पूर्ण रुपमा खुलेको छ, अर्थतन्त्रले एउटा लय पनि समात्न खोजेको छ, त्यसकारण पुँजी अन्य क्षेत्रमा परिचालन हुन पनि सक्छ’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा ओझाले भने।
यद्यपि बेच्नेहरु मात्रै नभई किन्नेहरुको पनि राम्रै उपस्थिति रहेको उनी बताउँछन्। ‘नाफा बुक गर्नका लागि बेच्नेहरु त छन् नै, किन्नेहरुको पनि राम्रै उपस्थिति देखिन्छ, धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ’ उनले भने। केही ठूला लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप आफ्नो ऋण घटाउनका लागि सेयर बिक्री गरेको पनि हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
बजारलाई यतिबेला प्रभाव पार्ने अर्को पक्ष बैंकहरुमा नगद कमी आउनु हो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न यो सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरिरहेको छ। तसर्थ तलब र भत्ताबाहेकका क्षेत्रमा सरकारी खर्च भएकै छैन। यसले बैंकमा भएको निक्षेप पनि घट्दै गएको छ र बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ।
यहीं नगद अभावकै कारण एक महिनामै अन्तरबैंक दर दोब्बरले बढेर ४.८७ प्रतिशतमा पुगेको छ।
अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई ब्याजदर बढ्दै जाने संकेत देखा परेको छ। भदौदेखि लागू हुनेगरी निक्षेपमा केही बैंकले ब्याजदर बढाइसकेका छन्।
यसले बैंकहरुमा नगद अभाव भएको र ब्याजदर अब बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ। तसर्थ अब बजारले तत्काललाई ३१९८ को रेकर्ड तोड्ने संभावना क्षीण बनेको छ।
‘यो वर्ष त्यो रेकर्ड तोड्ने संभावना म देख्दिनँ’ लगानीकर्ता पिताम्बर खरेलले भने ‘किनकि भ्याक्सिनको उपलव्धता बढेसँगै कोरोनाको असर कम हुँदै गएको छ, निषेधाज्ञा पनि पूर्ण रुपमा हटिसकेको छ, बन्द भएका पार्टीप्यालेस, फिल्म हल लगायत क्षेत्र खुल्न थालिसकेका छन्, ब्याजदर पनि बढ्न सक्ने देखिएको छ।’
यसअघि अरु क्षेत्र ठप्पजस्तै रहेको र जोखिम पनि रहेकाले सेयर बजारमा पैसा आएको तर त्यो पैसा अब फेरि अन्य क्षेत्रमा जरुरत परिसकेकाले बिक्री चाप बढ्न गई बजार घटेको उनी औंल्याउँछन्।
‘मार्केट डेप्थमा भर नपर्नू’
‘मार्केट डेप्थ’ हेर्दा धेरैजसो कम्पनीको सेयर बिक्रीभन्दा खरिदतर्फ चाप परेको छ। तर मार्केट डेप्थमा ठूला लगानीकर्ताले झुक्याउने गरेको पाइन्छ। सबैभन्दा अगाडि ठूलो संख्यामा खरिद गर्नेहरु बसेकै बेला ठूला लगानीकर्ताले त्यहीं मूल्यमा एकैपटक आपूर्ति गरिदिने गरेको बताउँछन् खरेल।
त्यसकारण सो आपूर्ति बिक्रीतर्फ देखिँदैन। ‘मूल्य म्याच हुनेवित्तिकै कारोबार भइसक्छ, अगाडि थोरै थोरै सेयर बिक्रीमा राखिदिने, अनि मूल्य बढेर खरिद गर्नेहरु थुप्रिँदा एकै पटक ठूलाले आपूर्ति गर्दिन्छन्, यसले गर्दा बिक्रीतर्फ नदेखिइकन सिधै कारोबार सम्पन्न हुने गरेको हो।’
मार्केट डेप्थ हेरेर साना लगानीकर्ता फस्ने गरेको उनले टिप्पणी गरे। मार्केट डेप्थ हेरेर किन्नेहरु धेरै भएको भनी आँकलन गर्न नहुने उनले सुझाव दिए।
हेर्नुस् पछिल्ला दिनकाे नेप्से क्यान्डिलस्टीक, भाेल्यूम र स्ट्रेन्थ इन्डेक्स लाइन
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १७, २०७८, २०:४२:००